IK4 ▷ ➡️ - Konke mayelana nemidlalo yevidiyo nokududuza ➡️
iMacOS / IOS / Apple
Indlela yokulahlekelwa ama-hips ngesonto?
Indlela yokubeka inja esifubeni?
Ngingazi kanjani ukuthi ikati lami linamakati amaningi ngaphakathi?
Sinjani isibankwa futhi sidla ngani?
Ungazizwa kanjani unecala?
Indlela yokuzuza isisindo nesisindo somzimba?
Indlela yokwenza i-origami yephepha?
Ungawenza kanjani ama-massage wokuphumula?
Ungasithola kanjani isinqumo se-matrix engu-3 × 3?
Ungaba kanjani i-mermaid yangempela?
Indlela yokwenza izicupho zezinyoni ezincane?
Indlela yokubeka i-vocho ngesikhathi?
Idlalwa kanjani i-badminton?
Ungaqala kanjani i-quad?
Indlela yokwenza izimbiza ngamabhodlela epulasitiki isinyathelo ngesinyathelo?
Indlela Hack Wii yami?
Indlela yokwenza i-vinaigrette yase-Italy?
Ungayilanda kanjani i-Snapchat
Indlela yokwenza isibani sasekhaya ngaphandle kukagesi?
Indlela yokwenza isipele idatha ku-hard drive ngaphambi kokufometha?
Ungazi kanjani ukuthi bangibiza besukaphi?
Indlela yokwenza imaski yekhadibhodi ngosuku lwabafileyo?
Indlela yokwenza inkukhu ethosiwe e-crispy ekhaya?
Indlela yokususa imibuthano emnyama?
Uzigoqa kanjani izinkophe zakho ngesipuni?
Indlela yokwenza uphahla lwemoto yesabelomali?
Indlela yokwenza umuntu wesifazane othanda abesifazane?
Ungazi kanjani ukuthi zingaki izingane engizoba nazo ngemigqa yesandla?
Indlela yokwenza i-pineal gland isebenze?
Indlela ukususa amabala?
Indlela yokugwema i-anti-doping yomchamo?
Indlela yokunciphisa isisu ngokushesha?
Usifaka kanjani isivalo somlomo?
Ungasusa kanjani ama-weevils?
Indlela yokuheha isoka lami langaphambili?
I-moringa itshalwa kanjani?
Ungawasusa kanjani ama-freckles ebusweni ngokushesha?
Ungawagcwalisa kanjani kabusha ama-cartridge kayinki e-HP?
Indlela yokushayela owesifazane ngokuhlanya ngokocansi?
Indlela yokulola ikhala nge-makeup?
Ungayifaka kanjani imibhalo engezansi ye-SRT?
Indlela yokwenza i-matte yomdwebo ocwebezelayo?
Indlela yokwenza ucansi olusheshayo?
Indlela yokudala ukungezwani kocansi?
Indlela yokuhlanza insimbi egqwalile?
Iphefumula kanjani inkomo?
Bakhuluma kanjani eBrazil?
Indlela yokwenza ama-tattoos ekhaya?
Oxhumana Nabo Abazithandayo I-IPhone: Bayini Futhi Ungazibeka Kanjani Ngokufanele
Oxhumana nabo abathandayo be-iPhone: ukuthi bayini kanye nendlela yokusetha ngendlela efanele Umsebenzi wokudala othintana nabo abathandayo wawutholakala kumaselula amaningi eminyakeni eyi-15 edlule, kodwa ngaleso sikhathi wawenziwa ngenjongo yodwa yokukwazi ukudayela ngokushesha inombolo oyifunayo. . Kumasistimu okusebenza esimanje eselula, "Izintandokazi" kumhlahlandlela... ufunde kabanzi
Oxhumana Nabo Abangenagama ku-iPhone: Kungani futhi Ungayilungisa Kanjani?
Oxhumana nabo abangenamagama ku-iPhone: kungani futhi kanjani ukulungisa? Inkinga yokungenisa uhlu lwabathintwayo ku-iPhone kusuka ezinsizeni zezinkampani zangaphandle noma i-SIM khadi ivamile futhi isikhathi esiningi ibonakala njengamagama angekho (amadijithi ezinombolo kuphela aboniswayo). Okufanayo … ufunde kabanzi
Ama-Cartridges ahambisanayo - Ungakugwema Kanjani Ukuphrinta Kuvinjiwe
Ama-cartridges ahambisanayo: ukugwema kanjani ukuvinjwa kokuphrinta Amanye amamodeli ephrinta akuvumela kuphela ukuthi usebenzise amakhatriji oqobo ukuze uphrinte. Thina, kwa-QuimeraRevo, sinqume ukwenza umhlahlandlela lapho sichaza khona ukuthi ungakugwema kanjani ukuvimba ukuphrinta uma ufuna ukufaka ama-cartridges ahambisanayo. Kufanele nje ucabangele ulwazi... ufunde kabanzi
Oxhumana Nabo be-VIP: Ungalusetha Kanjani Uhlu Lwama-imeyili Olubalulekile ku-imeyili ku-iPhone, i-iPad, ne-Mac
Oxhumana nabo be-VIP: Uluhlela Kanjani Uhlu Lwama-imeyili Abalulekile Kumeyili ku-iPhone, i-iPad, ne-Mac Ukuthola abathintwayo kuhlelo lokusebenza lwe-Imeyili kungenziwa kube lula kakhulu ngokubanika isimo se-VIP. I-VIP (Umuntu Obaluleke Kakhulu, ehunyushwa ngokuthi “Umuntu Obaluleke Kakhulu”) ikhonjiswe ebhokisini lokungenayo eline... ufunde kabanzi
I-Spotify Eqhekekile i-iOS 2021: Ungayifaka kanjani
I-Spotify Cracked iOS 2021: Ungayifaka Kanjani Khumbula izinsuku ezimnandi zakudala lapho okwakudingeka ukwenze nje ukulanda uhlelo lokusebenza lwe-Safari ukuze usebenzise i-Spotify mahhala kunoma iyiphi i-iPhone? Well kufanele wazi ukuthi usengakwenza nanamuhla. Umdali wesevisi yomculo edume kakhulu emhlabeni, une... ufunde kabanzi
IPirateBay: ezinye izindlela ezingcono kakhulu noma ukuthi ungangena kanjani kusayithi
I-PirateBay: Ezinye izindlela ezingcono kakhulu noma indlela yokufinyelela i-Pirate Bay (ephinde yaziwe ngokuthi i-TPB) isayithi lesifufula wonke umuntu othanda isifufula okufanele azi ngayo, empeleni izibiza ngengosi eqine kakhulu kuwebhu. Itheku empeleni liyisikhungo, isiza sasungulwa yiPirate Party… ufunde kabanzi
Ikhodi Yephutha le-Service Control Manager 7000, 7001, 7009, 7011, 7023, 7031, 7034, 7043 ku-Windows 10 - Ongakulindela Nendlela Yokukulungisa
I-Service Control Manager Ikhodi yephutha 7000, 7001, 7009, 7011, 7023, 7031, 7034, 7043 ku Windows 10: yini ongayilindela nokuthi ungayilungisa kanjani Uma ungomunye walabo basebenzisi ababheka kumcimbi wokubuka Windows 10 (Win +R – eventvwr.msc) ukuze uhlaziye amaphutha, kuwo wonke amathuba uzothola amaphutha ana... ufunde kabanzi
Uyini usayizi we-pixel wamashidi we-A4, A3, A2, A1 no-A0 ngokususelwa ku-DPI?
Ungakanani usayizi wephikseli wamashidi angu-A4, A3, A2, A1 kanye no-A0 asekelwe ku-DPI? Cishe bonke abasebenzisi besimanje be-PC nabeselula bazi okuthile ngezinqumo futhi bangawubona umehluko phakathi kwekhamera yenzwa engcono, isithombe sokuqapha esingcono nevidiyo yekhwalithi engcono nge... ufunde kabanzi
IMenenja Yomsebenzi We-Mac OS Nezinye Izindlela Zokuqapha Uhlelo
I-Mac OS Task Manager nezinye izindlela zokuqapha uhlelo Abasebenzisi be-Novice Mac OS bavame ukuzibuza: iphi i-Mac Task Manager nokuthi yisiphi isinqamuleli sekhibhodi esiyethulayo, sisetshenziswa kanjani ukuvala uhlelo olulengayo, nokunye okunjalo. . Isimangaliso esinolwazi kakhulu ukuthi udala kanjani… ufunde kabanzi
Okufanele ukwenze uma izithombe zinyamalala kusuka kugalari ku-Android
Okufanele ukwenze uma izithombe zinyamalala kugalari ku-Android Ngezinye izikhathi kuma-smartphones e-Android, ungase uhlangabezane nenkinga: uvula "Igalari" kodwa zonke izithombe azikho. Sifuna ukukutshela ukuthi wenzeni kulezi zimo. Izimbangela nezindlela zokuxazulula inkinga Izimbangela zalokhu kwehluleka zingahlukaniswa ngamaqembu amabili: ... ufunde kabanzi
Ungayishintsha kanjani i-imeyili ye-Supercell id?
Ungashintsha kanjani i-imeyili ye-Supercell ID? Kubantu abangabalandeli be-Clash of Clans, kungenzeka ukujabulela izici ezintsha ezizokusiza uzuze imiphumela engcono. Ngeke nje ukwazi ukushintsha usuke ku-imeyili ye-Super Cell ID, kodwa futhi nokuxhumanisa amadivaysi amaningi ukuze ujabulele igeyimu ngaphandle kwe ... ufunde kabanzi
Iphutha le-E_FAIL 0x80004005 ku-VirtualBox - izimbangela nezixazululo
E_FAIL 0x80004005 iphutha ku-VirtualBox - izimbangela nezisombululo Abasebenzisi abaningi bahlangabezana nephutha E_FAIL 0x80004005 kusuka ku-MachineWrap, MediumWrap nezinye izingxenye lapho beqala futhi kwezinye izimo ngaphambi kokuqala umshini we-virtual ku-VirtualBox, kungakhathaliseki ukuthi isistimu yokusebenza efakwe kuyo (Windows 10 nangaphambilini) , Linux nabanye). Imininingwane yalesi sifundo... ufunde kabanzi
I-Family Link - idivayisi ibikhiyiwe, ayikwazi ukuvulwa - yini okufanele uyenze?
I-Family Link - idivayisi ikhiyiwe, ayikwazi ukuvulwa - yini okufanele uyenze? Ngemva kokuthumela isihloko esimayelana nokulawula kwabazali ku-Android ohlelweni lokusebenza lwe-Family Link, kubikwa njalo emazwaneni ukuthi ngemva kokusebenzisa noma ngisho nokusetha i-Family Link, ifoni yengane igcina ivaliwe... ufunde kabanzi
Ungayixazulula kanjani i-HDMI engasebenzi ku-VGA adaptha
Uyilungisa kanjani i-adaptha ye-HDMI eya kwe-VGA ephukile Abasebenzisi abanamamonitha amadala bavame ukubhekana nokuntuleka kokuxhumana okudijithali emakhadini abo evidiyo amasha. Kulesi simo kunesixazululo esisodwa kuphela: ukusetshenziswa kwama-adaptha akhethekile nabaguquli. Ukusebenza kwayo ngendlela efanele kuncike ngqo ku… ufunde kabanzi
Ungalilungisa kanjani iphutha "Lidinga isenzo nge-akhawunti yakwa-Google"
Indlela yokulungisa iphutha elidingekayo lesenzo se-akhawunti ye-Google Indlela 1: Susa i-akhawunti Isenzo se-akhawunti esivame kakhulu sidinga iphutha. kusuka ku-Google kwenzeka kumadivayisi we-Android ngenxa yokususwa ngokuphelele kwe-akhawunti, yona ngokwayo exhunywe ku-smartphone. Lokhu kungenxa yokuthi… ufunde kabanzi
Kungani iringithoni izwakala iphansi ku-iPhone 12, 12 Pro, 11, 11 Pro, XS, XR naku-X nokuthi ungayivala kanjani
Kungani iringithoni izwakala ithule ku-iPhone 12, 12 Pro, 11, 11 Pro, XS, XR ne-X nokuthi ungayivala kanjani Uma une-iPhone 12, i-iPhone 11 Pro, i-iPhone XR noma enye i-smartphone ye-Apple efakwe Ubuso Isithwebuli se-ID, uzobe ubonile ukuthi ivolumu ... ufunde kabanzi
I-Last Of Us PC: Intuthuko emkhakheni wokulingisa
Uma ungathanda ukuzama umdlalo wevidiyo ogcwele abantu abaguqulwa baba amazimuzimu ngemva kobhubhane e-United States, sikumema ukuthi ufunde isihloko esilandelayo I-Last Of Us PC, intuthuko enkulu emkhakheni wokulingisa, yonke idatha. udinga ukuyibamba ukuze uyidlale futhi uyilande kukhompyutha yakho. I… ufunde kabanzi
Ungasivula kanjani "isitolo sesitifiketi" ku-Windows 7
Usivula kanjani “Isitolo Sesitifiketi” ku-Windows 7 Izitifiketi zingenye yezinketho zokuphepha ku-Windows 7. Kuyisignesha yedijithali eqinisekisa ukufaneleka nobuqiniso bamawebhusayithi ahlukahlukene, amasevisi, kanye namadivayisi azo zonke izinhlobo. Izitifiketi zikhishwa isiphathimandla sokunikeza izitifiketi. Agcinwe endaweni… ufunde kabanzi
Khubaza ukuphawula kokuthunyelwe ku-Facebook
Ukukhubaza ukuphawula kokuthunyelwe kwe-Facebook Kuwebhusayithi esemthethweni kanye nohlelo lokusebenza lweselula lwenkundla yezokuxhumana i-Facebook, ziningi izindlela zokuxhumana nabanye abasebenzisi, okuhlanganisa nekhono lokushiya amazwana kokuthunyelwe okuhlukahlukene. Kodwa-ke, lo msebenzi ungacishwa ngokuzenzakalelayo kuphela ezindaweni ezithile zensiza noma ... ufunde kabanzi
Ungavula kanjani ukukhanya kwangemuva kwekhibhodi ye-laptop
Ungakhanyisa kanjani i-backlight yekhibhodi ye-laptop Uma udinga ukuvula i-backlight yekhibhodi ye-laptop, kodwa ungazi ukuthi ukwenze kanjani, emiyalweni engezansi - imininingwane enemininingwane ngakho, okhiye nezinhlanganisela zokhiye ukuze uvule ekukhanyeni kwangemuva ku... ufunde kabanzi
Ungalilungisa kanjani iphutha le-DF-DFERH-01 lapho ubuyisa idatha kusuka kuseva ku-Android ku-Google Play Isitolo
Ulilungisa kanjani iphutha le-DF-DFERH-01 lapho ulanda idatha yeseva ku-Android ku-Google Play Isitolo Elinye lamaphutha akamuva avame kakhulu kumafoni e-Android lapho ulanda noma ubuyekeza izinhlelo zokusebenza ku-Play Market umyalezo othi DF-DFERH-01 Server Data Retrieval Iphutha Inkinobho ethi "Phinda", ngokuvamile engaxazululi lutho. Lo myalelo ucacisa… ufunde kabanzi
Faka imidlalo ku-PlayStation 3 yakho kusuka ku-USB stick
Ukufaka imidlalo ku-PlayStation 3 yakho kusuka ku-USB stick ye-Sony's PlayStation 3 game console kusadume kakhulu kubadlali bamageyimu namuhla, ngokuvamile ngenxa yokuba khona kwemidlalo eyikhethelo engathunyelwa esizukulwaneni esilandelayo. Ukufaka izinhlelo zokusebenza kalula kakhulu, ungasebenzisa i-Flash storage. … ufunde kabanzi
Khubaza i-carousel yesithombe sangemuva kuma-smartphone we-Xiaomi
Khubaza i-carousel yangemuva kuma-smartphones e-Xiaomi Akuwona wonke umuntu okhethe i-smartphone ye-Xiaomi othola uhlelo lokusebenza lwe-Wallpaper Carousel lucushwe ngokuzenzakalelayo ku-MIUI OS njengesixazululo esifanelekayo senkinga yesakhiwo sokukhiya isikrini. Ngesikhathi esifanayo, ngenxa yamathuba amaningi okwenza ngokwezifiso... ufunde kabanzi
Ungayilungisa kanjani i-Reboot bese ukhetha idivaysi efanele yokuqalisa noma ukufaka imidiya yokuqalisa, Ayikho idivayisi ebhuthwayo nephutha elifanayo
Uyilungisa kanjani Qalisa kabusha bese ukhetha idivayisi efanele yokuqalisa noma faka imidiya yokuqalisa, Ayikho idivayisi ebhuthayo kanye nephutha elifanayo lokuqalisa kudivayisi ekhethiwe yokuqalisa... ufunde kabanzi
Ungayakha kanjani iphrofayli eyimbumbulu ku-Instagram?
Ungayakha kanjani iphrofayili engamanga ku-Instagram? Uma ungathanda ukufunda ukwenza iphrofayili yomgunyathi enkundleni yokuxhumana ye-Instagram eyaziwayo kodwa ungazi ukuthi ukwenze kanjani, akufanele ukhathazeke. Ngesihloko esilandelayo sizokufundisa ngesinyathelo ngasinye okufanele usilandele ukuze uzifihle kule nkundla. I-Instagram isiphenduke… ufunde kabanzi
Isithombe esigcwele soxhumana naye ngenkathi ushaya ucingo ku-iPhone - ngikwenza kanjani?
Isithombe sesikrini esigcwele soxhumana naye ngesikhathi socingo ku-iPhone: ngikwenza kanjani? Ibhuku lamakheli kudivayisi yesimanje aliyona nje incwadi yocingo, kodwa ifayela lokuxhumana elisebenza kahle eliqukethe amakheli e-imeyili, izixhumanisi, amaphrofayili omphakathi, izinketho zokushaya, nolunye ulwazi olumayelana nabantu. … ufunde kabanzi
Ungazi kanjani ukuthi ngubani owakhansele umyalezo ku-Instagram?
Ungathola kanjani ukuthi ubani okhansele umyalezo ku-Instagram? Yize ziningi izinhlelo zokusebenza zokuthumela nokwamukela imiyalezo, i-Instagram ingathathwa njengenye esebenza kahle kakhulu futhi ekhethwa umphakathi. Inkundla yayo kulula kakhulu ukuyiqonda, futhi ihlanganisa amathuluzi amahle kakhulu ezinye izinhlelo zokusebenza ezingenawo. Namuhla sifuna ukukhuluma nawe mayelana... ufunde kabanzi
Uhlobo lokubuyekeza lwe-BIOS American Megatrends Inc.
Isibuyekezo se-BIOS Uhlobo lwe-American Megatrends Inc. Ngaphandle kwenani elikhulu lamabhodi omama akhiqizwayo, bambalwa abathengisi bama-chip e-BIOS wabo. Enye edume kakhulu i-American Megatrends Incorporated, eyaziwa kangcono ngesifushaniso esithi AMI. Namuhla sifuna ukukutshela ukuthi kufanele ubuyekeze kanjani lolu hlobo lwe-BIOS. Isibuyekezo se… ufunde kabanzi
Ungalanda kanjani amavidiyo wangasese kusuka ku-TikTok
Ungawalanda kanjani amavidiyo ayimfihlo ku-TikTok TikTok isivele iphakathi kwezinkundla zokuxhumana ezisetshenziswa kakhulu njengamanje. Kuyo ungathola izinhlobo ezahlukene zamavidiyo, ikakhulukazi ajabulisayo. Lawa mavidiyo angaba sesidlangalaleni noma abe yimfihlo, futhi kuye ngokuthi akuluphi uhlobo, angadawunilodwa noma angadawunilodwa. Fra I-Telegraph bots ehamba phambili kukhona futhi… ufunde kabanzi
Ikhompyutha ivula icishe ngokushesha
Ikhompyutha ivula futhi ivale ngokushesha Inkinga evamile ngekhompyutha ukuthi ivula futhi ivale ngokushesha (ngemuva kwesekhondi noma emibili). Ngokuvamile kuhamba kanje: inkinobho yamandla iyacindezelwa, inqubo yokunika amandla iqala, bonke abalandeli bayaqala, futhi ngemva... ufunde kabanzi
Ungazi kanjani ukuthi i-iPhone ingenwe yini ngobugebengu
Ungazi kanjani ukuthi i-iPhone igqekeziwe Izinsuku ezimbalwa, i-applephone yakho ithatha isikhathi eside ukwethula uhlelo lokusebenza noma umane ube nomuzwa wokuthi kukhona umuntu okuhlolayo. Kungakho ufuna okokufundisa okuchaza ngokuningiliziwe ukuthi ungaqonda kanjani uma i-iPhone igqekeziwe. Thina kwa-QuimeraRevo senze isifundo esifanele… ufunde kabanzi
Kopisha isixhumanisi kuphrofayli yakho yeTelegram ku-Android, iOS, Windows
Kopisha isixhumanisi kuphrofayela yakho ye-Telegraph ku-Android, i-iOS, iWindows Ngokungafani nezithunywa eziningi, kuTelegramu isihlonzi somsebenzisi akuyona nje inombolo yakhe yocingo esetshenziswa lapho kubhaliswa, kodwa futhi igama eliyingqayizivele, ngaphakathi kohlelo lokusebenza lingasetshenziswa njengesixhumanisi iphrofayili. Yini enye, … ufunde kabanzi
Lungisa iphutha elithi "Ayikho Idivayisi Ebhuthazayo" kwi-laptop ye-Acer
Lungisa iphutha elithi “Ayikho Idivayisi Esebenza Ngomshini” kwi-laptop ye-Acer Inketho 1: Setha idrayivu njenge-bootable Isizathu sokuqala esingaba khona sephutha elithi “Ayikho Idivayisi Esebenza Ngomshini” kumalaptop e-Acer, nokunye futhi, ukuthi i-BIOS ayazi ukuthi iyiphi idivayisi okufanele iqale. . Lokhu kuvame ukudalwa yizinto ezilandelayo: izenzo… ufunde kabanzi
Ama-Windows Emulators e-Android
Ama-Windows Emulators e-Android Ngenxa yamandla anomkhawulo weplathifomu ye-Android, kungase kudingeke ukuthi usebenzise inguqulo egcwele ye-Windows njengohlelo lokusebenza oluzimele lodwa. Lona umsebenzi ongenzeka ngenxa yokuthuthukiswa okusebenzayo kwamadivayisi wesimanje we-Android, amaningi awo angenawo umona kumakhompyutha omuntu siqu e… ufunde kabanzi
Ungazithola kanjani izaziso ezisusiwe kusuka ku-iPhone
Uzithola kanjani izaziso ezisusiwe ku-iPhone Ngenxa yejubane lokuvula kumadivayisi amasha we-Apple, kungakhathaliseki ukuthi afakwe i-Touch ID noma i-Face ID, futhi ikakhulukazi i-automation esiyisebenzisayo ngokushesha nje lapho sithatha ifoni ezandleni zethu, izikhathi eziningi. sivula ifoni nangaphambi kokuthi ufunde izaziso zethu. … ufunde kabanzi
Ungayisusa kanjani i-akhawunti ye-Facebook ngaphandle kwephasiwedi ne-imeyili?
Uyafuna ukwazi ukuthi ungayisusa kanjani i-akhawunti ye-Facebook ngaphandle kwephasiwedi ne-imeyili? Awufuni ukuqhubeka ne-akhawunti yakho ye-Facebook, futhi unquma ukuyisusa ngokuphelele. Sizokukhombisa izinyathelo okufanele uzilandele ukuze wazi ukuthi ungayisusa kanjani i-akhawunti ye-Facebook ngaphandle kwephasiwedi ne-imeyili? Kanjani … ufunde kabanzi
Windows 10 iqala kabusha ngokucisha, ngenzani?
Windows 10 iqala kabusha ekuvaleni, ngenzenjani? Kwesinye isikhathi, ungathola ukuthi uma ucindezela u- “Vala shaqa”, yakho Windows 10 ikhompuyutha noma i-laptop iqala kabusha esikhundleni sokucisha. Sekushiwo lokho, ukukhomba imbangela yenkinga, ikakhulukazi kumsebenzisi oqalayo, ngokuvamile akulula. Lesi sifundo sinemininingwane yokuthi yini okufanele uyenze uma Windows 10 iqala kabusha... ufunde kabanzi
Izinzuzo nobubi besistimu yokusebenza ye-MacOS
Izinzuzo nezinkinga zohlelo lokusebenza lwe-macOS Abasebenzisi abaningi bacabanga ukuthuthela emikhiqizweni ye-Apple, ikakhulukazi labo abasebenza ekwakhiweni, ihluzo kanye nemultimedia. Ake sithole ukuthi i-macOS iyinhle kangako yini kokubili umsebenzi nokuzijabulisa. Izici zohlelo lokusebenza lwe-Apple Uhlelo lokusebenza oluseduze ... ufunde kabanzi
Buka umlando wokuphequlula kusiphequluli se-Opera
Buka umlando wokuphequlula kusiphequluli se-Opera Umlando wamakhasi avakashelwe kusiphequluli se-Opera ukuvumela ukuthi ubuyele kumasayithi avakashelwe ngaphambilini ngisho nangemva kwesikhathi eside. Ngaleli thuluzi, kungenzeka "ungalahlekelwa" insiza yewebhu ebalulekile umsebenzisi angazange ayinake ekuqaleni noma akhohlwe ukuyengeza... ufunde kabanzi
I-MegaSearch: Ungawasesha Kanjani Amafayela ku-MEGA
I-MegaSearch: Ungawasesha Kanjani Amafayela ku-MEGA Ingabe uyawazi amandla amangalisayo e-Mega kodwa uyazibuza ukuthi angawacinga kanjani amafayela alayishwe kule sevisi enhle kangaka? Ungakhathazeki: olwandle olukhulu lwe-inthanethi kunesixazululo esisebenzayo, esisebenzayo nesisebenziseka kalula sakho. Sikhuluma nge-MegaSearch. I-Mega ingenye ehamba phambili… ufunde kabanzi
Ungayibuka kanjani bukhoma ku-Instagram ngaphandle kokubonwa?
Ungabona kanjani bukhoma ku-Instagram ngaphandle kokubonwa? Izimpilo ku-Instagram seziphenduke elinye lamathuluzi angcono kakhulu uhlelo oludumile olunikeza abasebenzisi balo ngamunye. Abadumile futhi abangadumile basebenzisa lesi sici esimangalisayo ukusakaza bukhoma futhi baxhumane nabo bonke abalandeli babo. Kodwa… ufunde kabanzi
IRutracker.org ayisebenzi - kungani futhi yini okufanele uyenze?
I-Rutracker.org ayisebenzi - kungani futhi kufanele wenzeni? Kusukela ekuqaleni kuka-Ephreli, abasebenzisi abaningi be-Russian torrent tracker rutracker.org babhekene neqiniso lokuthi i-rutracker ayivuli. Buyekeza 2016: Kusukela manje, i-rutracker.org torrent tracker ivinjiwe eRussia ngabahlinzeki bezinsizakalo ze-inthanethi ngokusho… ufunde kabanzi
Omunye umsebenzisi lapho ungena ngemvume ku-Windows 10: ungayilungisa kanjani
Omunye Umsebenzisi Ongena Kuwo Windows 10 - Uyilungisa Kanjani Abanye abasebenzisi bathola ukuthi "Omunye Umsebenzisi" (noma Omunye Umsebenzisi) uvela esikrinini sokwamukela futhi ubatshele ukuthi bafake igama lomsebenzisi nephasiwedi, kodwa iseshini yokuqala ayenzeki lapho. uyangena... ufunde kabanzi
Faka "Imodi Ephephile" nge-BIOS
Ukufaka "Imodi Ephephile" nge-BIOS "Imodi ephephile" kuhilela i-boot elinganiselwe ye-Windows, isibonelo ukubhutha ngaphandle kwamashayeli enethiwekhi. "Imodi ephephile" iyadingeka kuphela ukuxazulula izinkinga ngaphakathi kwesistimu, ngakho-ke akulungile ukusebenza njalo ne-OS (ukuhlela noma yimiphi imibhalo, njll.). Imodi… ufunde kabanzi
Ungayifaka kanjani i-BIOS ku-Windows 8 (8.1)
Indlela yokufaka i-BIOS ku-Windows 8 (8.1) Kulesi sifundo - izindlela ezi-3 zokungena kwi-BIOS uma usebenzisa i-Windows 8 noma i-8.1. Eqinisweni, liyifomu elingasetshenziswa ngezindlela ezahlukene. Ngeshwa angizange ngibe nethuba lokuzama zonke izindlela ezichazwe ku-BIOS evamile ... ufunde kabanzi
Oxhumana nabo be-Google abathembekile: Kuyini nokuthi Ungayisebenzisa Kanjani
Oxhumana Nabo Abathenjwa Be-Google: iyini nokuthi isetshenziswa kanjani Phakathi kwezinto eziningi ubuchwepheshe obukwazile ukuzithuthukisa, ngaphandle kokungabaza, ukuphepha. Amathuba okuxhumana nanoma ubani nganoma isiphi isikhathi, ukwenza kusebenze noma ukuvala izinto zangempela noma ezibonakalayo ukude, ukukwazi ukwenza kusebenze ezinye izindlela zokuvikela... ufunde kabanzi
I-Xuanlong Fallout 3 Isibhamu Sokuhlasela: Izici
Okulandelayo kulesi sihloko sizokwazisa ngayo yonke imininingwane ebaluleke kakhulu nge-Fallout 3 Xuanlong Assault Rifle. Awukwazi ukuphuthelwa lonke ulwazi esikuphathele lona. IFallout 3 Xuanlong Assault Rifle Fallout 3 Xuanlong Assault Rifle yathuthukiswa futhi yaklanywa ngenxa yeqembu lonjiniyela elivela… ufunde kabanzi
Ungazivulela kanjani iziteshi ze-iPhone telegram?
Ungawavula kanjani amashaneli e-iPhone telegraph? I-Telegraph ingelinye lamanethiwekhi omphakathi athakazelisa kakhulu emakethe, kuyo ungathola uchungechunge lwezinye izindlela nezinzuzo eziningi zokuxhumana ezikunikeza zona zihlangene kokukodwa, yize ingeyona edume kakhulu phakathi kwabasebenzisi benethiwekhi yezenhlalo,… ufunde kabanzi
Indlela Yokulondoloza Abashayeli BeWindows 11
Ungasisusa kanjani isithombe ku-Windows 10 futhi Windows 11 sesha
Ibuyekeza i-Internet Explorer ku-Windows XP
Ungayisula kanjani inkumbulo ye-RAM ku-iPhone
Ukudala isitayela esihle se-Windows 10
Ulilungisa kanjani iphutha 0xc00d36c4 ku Windows 10
Ungavula kanjani ukuvikelwa kwesistimu ku-Windows 10 kanye ne-Windows 11
Thola amafayela akamuva alondolozwe kukhompuyutha
"Ayikwazanga ukudala umsebenzi wokuphrinta" ku-Windows 10
Layisha izithombe kusuka ku-iCloud ku-iPhone yakho
Ungayisusa kanjani i-akhawunti ye-Microsoft ku-Windows 11
Yehlulekile ukukopisha amafayela e-bcdboot boot - ingalungiswa kanjani?
Ungangenisa kanjani oxhumana nabo besuka ku-Gmail baye ku-iPhone?
Indlela yokwenza i-aphoyintimenti e-Isste?
Indlela yokwenza amanzi e-rose ekhaya?
Indlela ukususa nail?
Ungayithola kanjani kabusha iphasiwedi ye-Hotmail?
Ungabeka kanjani izinyathelo ku-Autocad?
Indlela yokwenza amashiya ama-bushy?
Ungawadlulisela kanjani amafayela amakhulu ku-USB?
Ungawakha kanjani amagrafu ku-Excel?
Indlela yokufaka i-Oracle?
Indlela yokuklama isimemo somshado?
Indlela yokukhulula isikulufu esigqwalile?
Indlela yokunciphisa imibuthano emnyama nezikhwama ngaphansi kwamehlo?
Asebenza kanjani amabhakhodi?
Ungawathola kanjani ama-chords engoma?
Ungasusa kanjani izinwele ze-eyelashes ngezinwele?
Ngisishintsha kanjani isixhumanisi se-Facebook?
Ulazi kanjani ikheli le-IP le-inthanethi yami?
Indlela yokwenza i-bunker?
Dala ama-gifs ku-iPhone
Dala ama-gifs kusuka kuvidiyo ku-iPhone
Indlela ukususa izibopho?
Ungakhulisa kanjani noma unciphise izithonjana zedeskithophu nefolda ku Windows 11
Yehlisa usayizi wezithombe ku-iPhone
Ungasishintsha kanjani isinqumo sesithombe ku-iPhone
Lungisa iphutha 0x800f0988 ku Windows 10
Ungawuvula kanjani usinki?
Indlela yokuqinisa udonga?
Indlela yokufaka i-eye shadow?
Ungasithatha kanjani isithombe sesikrini seselula?
Ungabala kanjani amathuba?
Uyenza kanjani indoda ikukhumbule?
Ungamenza kanjani umzala wakho akuthande?
Igrafu kanjani isibalo somugqa?
Indlela yokusingatha izinkinga zemizwa?
Iyini imichilo eholayo nokuthi ungayisika kanjani?
Ikhasi1 Ikhasi2 ... Ikhasi389 Okulandelayo →
Android Ukufunda Amakhonsoli Curiosities Kanjani Ungenza kanjani Ungalulama Kanjani Facebook I-Firmware -Google i-Google Chrome Instagram Imiyalo Internet Explorer I-inthanethi neziphequluli iOS Itunes Imidlalo Linux iMacOS / IOS / Apple I-Mozilla Firefox AmaSelula Opera Outlook Photoshop Isitolo Play Izinhlelo Lungisa ikhompyutha Ezokuphepha namaGciwane Skype Izixazululo Izixazululo zeWindows I-Sony vegas Spotify I-Steam yocingo Viber WhatsApp Windows Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows XP Youtube Zoom
© 2022 IK4.es. Wonke Amalungelo Agodliwe.
I-Creative Yeka Konke Mayelana Nobuchwepheshe